Muqdisho: Barnaamijka New Deal ee laga deyriyey oo laga shiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Barnaamijka New Deal ee laga deyriyey oo laga shiray
Kulan uu shir guddoominayey Ra’iisul wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte oo ay ka qeyb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirrada iyo saraakiisha ka socota hey’adaha iyo wadamada deeq-bixiyeyaasha ee ku yaboohay mashruuca New Deal ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Shirka ayaana diiradda lagu saaray wixii ka qabsoomay mashruucaas iyo sidii loogu jawaabi lahaa saluugga ay dowladda Federaalku ka muujisay habsami u socodka barnaamijkan.
Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, C/raxmaan Sheekh Yuusuf Ceynte ayaa warbaahinta qaranka u sharraxay muhiimadda uu shirkan lahaa, iyo doodda ku aadaneyd saluugga laga qabo qaar ka mid ah qodobada heshiiska New Deal-ka ee la fulin waayey.
“Shirkan bilaha ah, waa mid diiradda lagu saaro mashaariicda New Deal, waxaa shir guddoonayey ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda, deeq-bixiyeyaashana wey ka soo qeyb galeen, waxaan ka doodnay sidii horey loogu wadi lahaa arrimaha barnaamijkan iyo in si deg deg ah tallaabooyin loogu qaado waxyaabaha ka qabsoomi waayey New Deal-ka”. Ayuu yiri Ceynte.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa sheegay in shirka lagu falanqeeyay sida loo xoojin lahaa meelaha uu gaabisku ka jiro.
“Waan isku soo qaadnay saluugga ay qabaan shacabka iyo dowladda ee ku aaddan barnaamijka New Deal-ka, waxaa jira mashaariic la fuliyey, hadana weli waxaan sii wadi doonnaa doodaheenna la xiriira in la dardar galiyo lacagaha mashaariicda lagu fulinayo sidii loo heli lahaa, kuwaas oo mararka qaar soo daaha” ayuu sii raciyay.
Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya sanadkii 2013-ka ugu yaboohay dhaqaale badan oo ka caawinaya sidii dib loogu dhisi lahaa, lacagtaas oo ku baxeysa mashruuc weyn oo lagu magacaabo New Deal, qaar badan oo ka mid ah wali lama helin. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in mashruucan uu ku socdo si gaabis ah oo aysan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedba ku qanaci Karin.
Dhawaan, waxaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in barnaamijka New Deal uusan u socon qaabkii loogu talagalay.
Sawirro: Qarax la dhigay dhinaca wadada Maka Almukarrama oo la fashiliyey